¿Es IOS mas fluido que Android? | Androidsis
Ngaba i-IOS yencindi ngakumbi kune-Android?
Zack | | Tutorials, Iinguqulelo ze-Android
Sonke siyayithanda i-Android. Kodwa ukuba siphathe i-Android kunye ne-IOS siye saqonda ukuba kwi-IOS ukusebenza kubonakala ngathi kunamanzi ngakumbi. Namhlanje ndiza kusombulula umbuzo ka Kutheni le nto i-Android ingacacanga njenge-IOS?
Ewe, impendulo inikwa yinjineli kaGoogle uAndew Munn ngeGoogle +:
Ayizizo ezokuphumla ze-GC. Kwaye kungenxa yokuba i-Android iphumeza i-bytecode kwaye ngenxa yokuba i-iOS yenza ikhowudi yemveli endaweni yoko. Isizathu kukuba kwi-iOS, lonke ujongano luqhubekeka kwiinkqubo ezinikezelweyo, ujongano olubaluleke kakhulu ngexesha lokwenyani olwenzeka xa ezinye izinto zimisiwe. Nangona kunjalo i-Android ibaleka kwisitayile sekhompyuter yendabuko, apho imodeli yokunikezela yenzeka kwinkqubo ephambili ngokubaluleka kwesiqhelo, ibangela ukuba yonke into ibonakale incinci.
Umzekelo woku ungangumzekelo ukuba ukhangela kwi-intanethi, kwi-IOS ukuba xa ulayishe isiqingatha sokulayisha iphepha ohamba kulo liya kuyeka ukulayisha kwaye xa ukhulula umnwe uya kulayisha kwakhona. Kwi-Android, ngelixa ujikeleza iphepha, liya kugqiba ukulayisha ngaxeshanye.
Oku umzekelo akwenzeki kwizixhobo ezingumbini we-Android, kuba ikernel nganye inoxanduva lokwenza into enye (ukulayisha iphepha kunye nokulayisha ujongano lwescreen).
Ewe le yingcaciso elula. Kwabo banolwazi ngakumbi ngalo mbandela, ndikunika ingcaciso epheleleyo (Sele ibandakanyekile ukukhawulezisa izixhobo, ukulungiswa kwekhowudi, izinto eziphambili, njl.njl.), ezenziwe ngu URicardo Galli:
Ingxaki ye-latency kwi-Android ngokusisiseko yingxaki kumcwangcisi. I-Android isebenza ngcono kakhulu nge "multitask" (eneneni "multiprogramming") kuba iyiLinux kwaye ngokuqinisekileyo abayichukumisanga inkqubo yolawulo. Ukulungisa le ngxaki kufuneka uphucule ishedyuli. Ngokuqinisekileyo basebenza kuyo, kwaye eneneni iphuculwe kakhulu.
Enye ingxaki anayo i-Android kukuba inkqubo nganye ngumatshini ohlukileyo weJava abalungisileyo ngokwabelana ngememori yeelayibrari eziqhelekileyo (njengeLinux / UNIX ngokwendalo) kunye nekhowudi eyonyuswe kakhulu.
Iinkqubo ezikwi-Android zikule khowudi iphakathi etolikwa ngumatshini obonakalayo, ngelixa ikwi-iOS yindalo kwiprosesa (enika izibonelelo zesantya, kodwa izinto ezingalunganga zokuphatheka nokwahluka, okusonjululwa ngohlobo olunye lwezixhobo zekhompyutha) . Ngokuqinisekileyo kukho izinto ezinokuphuculwa, kodwa oku kungalunganga kuncinci nangaphantsi ngokwandiswa kwesantya seeprosesa, ngakumbi i-cache.
Ishedyuli ayisiyo ngqo isayensi, yinto exakayo, enezinto ezininzi "ezigqithileyo" (iimeko zekona) apho sinokufumana khona kwaye songeze izinto ezifundwayo ezinamava.
Kungenzeka ukuba ingxaki inyamalale (ngenxa yezizathu ezithathu ezisisiseko, ukuphuculwa kweshedyuli, ulawulo lomatshini oqinisekileyo weJava kunye nokuphuculwa kwezixhobo), into engenakuthethwa, okwangoku, kukuba soloko ulungile, kwaye leyo yingxaki yoyilo yoqobo
Kodwa nantsi eyona nto intle malunga ne-Android, kwaye kukuba iinjineli ngokwazo ziyayamkela le kwaye zisebenze nzima ukuyiphucula. Kakhulu kangangokuba bekuye kugxilwe ekuqwalaselweni kwinguqulelo yayo entsha ye-ICS kwaye ngokuqinisekileyo iya kuyifumana (ukuba ayigqithi kuyo) kwinqanaba lokutyibilika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Ngaba i-IOS yencindi ngakumbi kune-Android?
Ndinayo i-galaxy nexus kwaye i-fluidity sele ithelekiseka ngeendlela ezininzi. I-ICS yimpumelelo malunga naloo nto.
Mna kwi-s2, nanjengoko iphuma ebhokisini, ine -apps ezingaphezulu kwe-120 ezifakiwe, iiwijethi, nayo yonke into, kwaye ubumanzi bulungile3
Usondele kulo mbandela ucace gca nangokucacileyo. Kudala ndingumsebenzisi we-andorid ixesha elide nakwizixhobo ezahlukeneyo, kwaye kuyinyani ukuba i-gaalxy s2 yifowuni yokuqala apho ndingenantlukwano ngokungafaniyo ne-iOS, mhlawumbi ngenxa yesiseko esiphindwe kabini, nangona ulungelelwaniso oluthambileyo ndicinga ukuba oko kukwaphembelela. +1
Esi sithuba ngesifumene * okuninzi * ngokunxibelelana neposti yoqobo, apho u-Andrew Munn ehlelele ukwalatha kwesinye isithuba ngu-Dianne Hackborn kwaye aphawule ukuba ulungile (yena = umfundi, yena = injineli ephethe isihloko ekuxoxwa ngaso. ).
Nanku ukuhlela kwakhe:
Hlela: + UDianne Hackborn ubhale impendulo kwesi sithuba. Ucacisa izinto malunga ne-Android endiye ndaphazama kuyo, kwaye ngokusisiseko uyayikhaba ithisisi yale post ngokucebisa ukuba ukhuseleko olwandisiweyo kunye nokuguquguquka kweqonga le-Android ngaphezulu kwe-iOS kungunobangela wentsebenzo ngaphezulu kwaye oko kuya kusanda ngokukhawuleza kwezixhobo kuya kunceda ukusombulula umba:
Kuya kuba bubulumko ukuthembela kwilizwi lakhe kunelam, kuba lilizwi lokugqibela kwimicimbi yesakhelo se-Android.
Ndine-SGS2 kwaye ndivela kwi-SGS kwaye kuyinyani ukuba ibonisa ukungunda kunye nokuphendula okungcono. Kodwa isene-latency encinci engenayo ios. Enye indlela yokufumanisa ngokulula kukusetyenziswa kwepiyano. Ukucofa kwiscreen ngendlela yokuba ibethi iviwe kwaye kanye emva koko inqaku lepiyano liya kuvakala. Oko kungabikho kancinci kokuncinci endikubekayo kunye ne-Android kwaye ios ayinayo. Ndiyathemba ukuba iyakulungiswa kuba ndiyazithanda ii -apps zomculo, hehe.
Kukho umahluko ongathandekiyo phakathi kweGingerBread kunye ne-Ice Cream Sandwich echukumisayo, ubumanzi, ukwenza izinto ezininzi, ukubonwa kuphuculwe kwinqanaba elikhulu endikhe ndalifumana ngeGPS S yam eyi-mono-core kunye neROM ephekiweyo ekhutshwe kuyo ikhowudi ye-ICS 4.0.1 kuphela. XNUMX ngaphandle kokucwangciswa okupheleleyo apha unokuyibona http://www.youtube.com/watch?v=B9e4iwoZ5xo Ngaphandle kwamathandabuzo, ngeJelly Bean Android iya kufikelela kwinqanaba layo njengenkqubo yokusebenza kwefowuni.
Into elungileyo ndigqibe kwelokuba ndithenge iSAMSUNG GALAXY S 2
ukuba ukuza kuthi ga ngoku ayindiniki ngxaki, ndonwabile ngayo
Isantya sayo siyamangalisa, iscreen sayo seSUPER AMOLED PLUS
Ngapha koko abasoze bafikelele kwi-ios ukuba ndiyayivumela kwaye bendine-android ezandleni zam zilunge kakhulu kodwa azisebenzi kwi-iphone nangaphezulu ukuba ine-jailbreak, khangela ulwazi oluncinci kwi-cydia nayo yonke into equlathe kunye nawe uza kubona umohluko omkhulu
Imvelaphi yegama lokuqala Gorkesat sitsho
Inika imvakalelo yokuba yonke into icingisiswe kakuhle, hayi kangako kwi-Android ethi, nangona ibonelela ngeendlela ezininzi, inomdla kwaye ayisiyomifanekiso. Ngapha koko, ekuphela kweqhosha elinazo ii-iPhones lenza kanye le nto uyifunayo kwisicelo ngasinye, ayifuni ngaphezulu (nokuba ayichukumisi okanye ayibikho emzimbeni)
Ukubambezeleka okuncinci ios engenako nako kuyaqwalaselwa
Yintoni eyayikho ngaphambili, i-Android okanye i-IOS?